रामेछापमा समुदायमा फैलियो कोरोना : सर्तकता शून्य, भएबाहक बन्ने आशंका
Milan Ghimire calendar_today २५ असार २०७७, 9:39 am
रामेछाप । रामेछापमा बिहिबारसम्म ४ सय ७९ जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको छ । जसमा २३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको जिल्ला अस्पताल रामेछापका कोरोना फोकल पर्सन डा. आनन्द आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्ममा २० जना निको भएर घर फर्किएका छन् । तीन जना लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाको वडा नं ४ मा बनाइएको क्वारेन्टिनमा उपचार गराइ रहेका छन् ।
के रामेछापमा समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएको हो ?
जिल्लाको मन्थली नगरपालिका ११ गेलुमा कुनै पनि ठाउँमा नगएकी अर्थात कुनै ट्रबलहिस्ट्रि नभएकी गर्भवती महिलामा कोरोना पुष्टि भएको छ । पेट दुखेपछि ती महिलालाई गेलु स्वाथ्य चौकीले थप उपचारको लागि पाटन अस्पताल रफर गरेको थियो । जिल्ला अस्पताल रामेछापका कोरोना फोकल पर्सन डा. आचार्यले पाटन अस्पतालको र उनको पारिवारीक स्रोतको भनाइ उदृत गर्दै भने उनीमा कोरोना पुष्टि भएको खबर छ । तर आधिकारीक जानकारी कोरोना पुष्टि भएको रिपोर्ट भने हामीलाई आएको छैन् । पाटल अस्पतालको आइसोलेनमा उपचार गराइरहेकी महिलाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उनको भनाई छ ।
जिल्लामा कति पुगे संक्रमित थाहा छैन कसैलाई ।
जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरु जिल्लाबाहिर रहेर कोरोना पुष्टि भएको धेरै भएपनि जिल्लामा कुनै त्यसको तथ्याङ्क नभएको जिल्ला अस्तालको भनाइ छ । हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो, भने जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या ३१ पुगेको आशंका गरिएको छ । तर जिल्ला अस्पताल भने त्यो तथ्याङ्क आफूसंग नभएको बताउछ । यसो हुनुमा ऊ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दोषी देँखाउछ ।
हामीलाई माथिबाटै जानकारी प्राप्त नभएको डा. आचार्य बताउछन् । समुदाय स्तरसम्म कोरोना फैलिएको आशंका गरेपनि जिल्लामा कोरोना संक्रमणका एक जना पनि संक्रमित नभएको जस्तो अनुभव गर्न पाइन्छ, बजारमा । कुनै सुरक्षा मापदण्ड बिना मानिसहरुको भिड्भाड् बढेको छ । ती गर्भवती महिलालाई गेलुबाट काठमाडौंसम्म पुर्याउने क्रममा मात्रै ३० जना भन्दा बढी मनिसहरुसंग उनको सम्पर्क भएको छ । उनीमा कोरोना पुष्टि भयो, तर उनको सम्पर्कमा आएकाहरु बजारमा छन् कुनै परीक्षण बिना । यसले जिल्लामा कोरोना फैलिने त्रास फैलिएको छ ।